कांग्रेसको प्रश्न : नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ? - Kendra Khabar
कांग्रेसको प्रश्न : नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?
२०७५, ७ मंसिर शुक्रबार ०७:२१
नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन भएको ९ महिनासम्म सरकार रहेको अनुभूति नै नभएको बताएको छ । सरकारको ९ महिनाको समीक्षा गर्दै कांग्रेसले यो अवधिमा सरकार कहाँ छ भन्ने अवस्था देखिएको बताए ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ‘मंसिर ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । ९ महिना पुगेको यो घडीमा “नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ” भनेर छोटो तर कारुणिक प्रश्न सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ उनले भने ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी प्रकरणको वास्तविकता रहस्यमय बनेको भन्दै कांग्रेसले यसमा गम्भीर घोटालाको आशंका गरेको छ । ‘हाइ फ्लाई एक्ससँग जहाज खरिद गरिएको हो कि नियोजित रुपले नयाँ दर्ता गरिएको सो कम्पनीले एयरबससँग खरिद गरेर नेपाल एयर लाइन्सलाई भाडामा उपलव्ध गराएको हो ? सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना भएको छ कि छैन ? गम्भीर घोटालाको आशंकामाथि गहिरो छानविन गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिले असोज २१ को वैठकबाट गरिएको माग म पुन दोहोर्‍याउन चाहन्छु’ शर्माले भनेका छन् ।